Warbixin iyo Sawiro Soodhaweyntii Madaxweyne Xasan Sheekh ee Garowe – SBC
Warbixin iyo Sawiro Soodhaweyntii Madaxweyne Xasan Sheekh ee Garowe
Posted by Webmaster on April 28, 2013 Comments
Madaxweyne Farmaajo oo guddi u saaraya beelo ku dagaallamay Cabudwaaq
Gudiga Doorashinka Soomaaliya oo Kulamo ka Wada Garoowe.
Maalinta Warfaafinta Soomaaliyeed oo lagu xusay Muqdisho
Madaxweynaha Puntland Cabdiraxman Maxamed Farole ,ku xigeenka Gen.Cabdisamad Cali Shire ,wasiiro ,xildhibaano ,taliyaasha ciidamada kala duwan ,aqoonyahano ,culimo ,dhalinyaro iyo ururada haweenka ayaa garoonka diyaaradaha Garowe ku soo dhoweyey Xasan Shiikh.
Xarunta madaxtooyada Puntland ayaa wafdiga uu horkacayay madaxwayanaha dowlada Somaliya loo galbiyey si ay kulamo ugu qaatan.
Madaxwaynaha puntland cabdiraxmaan shiikh maxamed maxamuud faroole ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay imaanshaha madaxwaynaha somaliya ee garoowe .
”Somalia waxa la iskugu soo celin karaa oo keliya waa Nidaamka Federaalka oo waxna la wadaago waxna la kala leeyahay” Ayuu yiri Farole oo sheegey in latashiyo iyo shirar ka yeelan doonaan dhamaystirka dhismaha Somalia.
”Wax badan ayaa ka dhiman hirgelinta nidaamka Federaalka ah ,wadadu waa mid qodxo iyo dhaqxaani taalo ,waxana looga gudbi karaa iskaashi ,kalsooni iyo isku samir” ayuu yiri Xasan Shiikh oo ka hadlayay sida dowladiisu ay u dhaqan gelineyso nidaamka Federaalka Somalia.
”Dalkaani waa mid ,war ma kaal go’naa iyo ma kala tagnaa maanta ma taagna laakiin sidee dadkii iyo dalkii shalay meeshay joogeen iskugu soo celinaa ayaa noo taal inaa ka shaqeyno ,Somali waa hal”sidaasi waxa yiri madaxwayne xasan.
Inta uu madaxwayne xasan shiikh uu kusuganyahay magaalada garoowe ayaa
waxa uu kulamo laqaadan doona madaxwaynaha puntland cabdiraxmaan maxamed maxamuud faroole waxana uu booqan doona sida lagu wado goobaha muhimka ah ee dowlada ee kuyaala magaalada Garoowe.